नोटबुक - ब्लग - प्रकाशितः चैत्र ५, २०७२ - नेपाल
नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको एक दिनअगाडि अर्थात् १९ फागुनमा जिल्ला प्रतिनिधिका लागि बसोवासको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएका नेता बलबहादुर केसी गौशालास्थित महाराजा होटलको रिसेप्सनमा निकै तनावमा देखिन्थे । सुरुमा लाग्यो, प्रतिनिधिसँगै जोडिएर आउने अतिरिक्त व्यक्तिलाई होटलले थप कोठा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण केसी जंगिएका होलान् ।
जसै काउन्टरनजिकै पुगेँ, सुनेर झसंग भएँ । केसी कोठा उपलब्ध नगराएका कारण होइन, बुक भएका कोठामा जिल्ला प्रतिनिधि नबसेको घटनाले तनावमा रहेछन् । उनी रिसेप्सनमा सोध्दै थिए, “यति धेरै व्यक्ति कहाँ गए ?” विचरा, होटलवाला ! उसलाई कांग्रेसी राजनीति के थाहा ? नम्र हुँदै भनिरहेको थियो, “थाहा भएन हजुर ! तपाईंहरूकै मान्छेलाई एकपल्ट सोध्दा थाहा होला नि !” केसीले आफ्ना पक्षमा रहेका केही जिल्ला सभापतिलाई सोधेपछि सबै उजागर भयो ।
वास्तवमा, जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि होटलमा आएपछि ‘हाइ ज्याक’को शैलीमा गायब भएका रहेछन् । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मानिने रामचन्द्र पौडेलको टिमको एउटा बुझाइ रहेछ, यसपालिको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षको भोट ५५ प्रतिशत छ र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको ४५ । बीचमा उठेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले चार–पाँच प्रतिशत भोट काटे पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा हुने कुरामा संस्थापन ढुक्क रहेछ ।
फेरि, खाना तथा बसोवासको जिम्माले गर्दा पनि निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ४१ वटा जिल्ला आफ्नो मानेर हिँडिरहेको संस्थापनको होस त्यतिबेला उड्यो, जब होटलबाटै केही प्रतिनिधि गायब भए । त्यसको असर पछि मतदानमा देखियो । निर्वाचन सकिएपछि देउवाका पक्षमा ५८.०२ प्रतिशत मत खस्यो भने पौडेलको पक्षमा ४१.२७ प्रतिशत मात्र । आखिर सभापतिको बाजी मारे, देउवाले ।
कहिले फेरिने मानसिकता ?
कांग्रेस मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनमा तडकभडक देखिनु सामान्य भइसकेको छ । तर, यसपालि कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आएका थुप्रै युवालाई प्रचार–प्रसारको पुरानो तौरतरिका चित्त बुझेनछ । विद्युतीय प्रविधिले चकाचौध भइसकेको अहिलेको समयमा पम्प्लेट, फ्लेक्स, भिजिटिङ कार्ड र पर्चाको बाढी देखेर असन्तुष्टि जाहेर गर्नेहरूको ठूलो जमात थियो, महाधिवेशन स्थलमा । दिउँसो भृकुटीमण्डपस्थित रत्नराज्य क्याम्पसको क्यान्टिनमा भेटिएका एक हुल युवा गुनासो पोखिरहेका थिए । भन्दै थिए, बाटोमा छरिएका पर्चालाई पाँच पैसाको हिसाबले गणना गर्दा पनि करोडौँ रुपियाँ खेर गयो होला । यो पैसाले त सानै भए पनि जिल्लातिर कम्तीमा एउटा राम्रो अस्पताल त बन्ने थियो ।”
वास्तवमा महाधिवेशनभन्दा तीन दिनअगाडिदेखि नै गरिएको भड्किलो प्रचारप्रसारले उनीहरूको कुरामा सहमति जनाउने ठाउँ थिए । रमाइलो कुरा, आफ्नो क्षेत्रका एक सभासद्, जो केन्द्रीय सदस् यमा पनि उठेका थिए । उनको प्रचार–प्रसार गरिरहेका तिनै युवा साँझमा अर्को रूपमा अवतरित भए । दिउँसो त्यति राम्रो कुरा गरेका तिनै युवा ‘डिस्कोमा नर्तकी’लाई पैसा फ्याँकेजस्तो भिजिटिङ कार्ड आकाशमाथि उडाइरहेका थिए । यो देखेपछि लाग्यो, कुरा राम्रो र चिप्लो गरेर मात्र नहुने रहेछ । समाजकै मानसिकता नबदली परिवर्तन नआउने रहेछ । र, यो परिवर्तनको संवाहक को बन्ने हो ? कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी वा अन्य दल !
महाधिवेशनको केही दिनअगाडि एकाबिहानै मोबाइलमा घन्टी बज्यो । यसो हेरेको, जिल्लाबाट रहेछ । उताबाट आवाज आयो, “ल है साथी π सहयोग गर्नु पर्‍यो । यसपालि बबाल गर्नुपर्छ । म पनि उठेको छु ।” मलाई पहिले नै थाहा थियो, जुन साथीले मलाई फोन गरेको थियो, उसको अर्को साथी पनि उसँगै कोटावाला सिटबाट उम्मेदवारी दिँदैछ । जिस्क्याएँ, “अनि, साथी–साथी किन लड्न लागेको ? शोले फिल्मको जस्तै क्वाइन टस गरे हुँदैन ?”
मेरो कुरा सुनेर सुरुमा त ऊ मज्जाले हाँस्यो । पछि, आफ्नै साथीको विषयमा भन्न थाल्यो, “त्यसलाई कसले चिन्छ र भोट हाल्छन् ? त्यो आफूलाई (देशव्यापी रूपमा) कांग्रेसी भनेर चिनाउन मात्र उठेको हो । जिल्लामा दुई–तीन लाख खर्च नगरेको भए, उसलाई प्रतिनिधि भएर आउन पनि धौ–धौ थियो ।”
उसको कुरा सुनेर मलाई रमाइलो लाग्यो । अरू बेला दिनमा एकपल्ट फोनमा कुरा नगरी बस्न नसक्ने साथी नै आज आफ्नो साथीको विषयमा मज्जाले कुरा काट्दै हिँडिरहेको छ । सोचेँ– साथीहरूलाई फोहोरी राजनीतिले राम्रैसँग गाँजेछ । सोधेँ, पैसा खर्च नगरी प्रतिनिधि बन्न सकिन्न ? उसले झनै फुरुंग हुँदै भन्यो, “साथी ! बीपीको लैनो गाईको के कुरा गरेको π पार्टी समाजवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेको थाहा छैन ?” म त ट्वाँ परेँ !
प्रकाशित: चैत्र ५, २०७२